Halloween soo socdo. Cabsiiyo saaxiibadaa la codadka ugu badan u xun ee abid! Marka laga soo wacayo, aad iPhone noqdo daaqad lahaa jahannamada! Halkee laga maqli doonaa buuqa ugu daran sharkii. Liiskani wuxuu hoos ku kooban yahay 10 naxdin iyo Gurtida spooky sida qaylo Zombie, jirdil, qaylo aadanaha, qososhay cadaabta iyo roobdhagaxyaale bahal. Waxaad ka dibna u soo bixi kartaa oo iyaga dajiyaan in Lugood iPhone la TunesGo iyo u isticmaalaan sida aad rabto. Samee qaar sanqadh cabsi leh hadda!
Muhiim waano: Hubi in aad dhali karo cawaaqibka haddii aad isticmaasho ringtones soo socda, fogaanayaan saaxiibadii joogo la cudurada wadnaha noqon lahaa wise- qaataan mas'uuliyadda falalka kuu gaar ah oo xaaladan ah marka loo baahdo.
1. Ruuxa ee guriga
Calaamadaha Ghostly in guriga waxaa ku dabataagan iyo wax cajiib ah ay dhacayaan.
2. naagta qeyliyo
Qof dumar ah ayaa la qaylinaya oo qaylo sida lagu soo gaartay murugo extremmely daran.
3. xanaaqay caanaqubta,
Caanaqubta, ayaa Naarta. Isku day inaad la hal mar la xayiray si dhuuxa. Waxaad saaxiibo u jeclaan lahaa.
4. Spooky qosliddu
Qososhay yaab ka boqorkii jahannamada, qof dilaa aad mar sidoo of ogaa.
5. Birta waashay,
Dadka inta badan halis u noqdaan markey cadhoodaanna u hesho. Maxaa dhacay haddii bir helay duurjoogta ah ???
Dadkii badnaa 6. Argagaxa
Faafinta murugo leh dadka kale hoos u dhigi doontaa in aad murugo. Sidee ku saabsan faafiyo aad argagax iyo dad?
Taasi waa hab si ay u bilaabaan Halloween!
7. ilkaha ka dhacay
Ilkaha waa mid aad u xoog badan marka ilkaha heli xun. Ma dareentaa sida marka aad ilkaha rujin?
8. Music Saacad guul daraysatay
Marka dhan kale ku guuldareysto in aad had iyo jeer wici kartaa dukaanka dayactirka saacad ah si aad u aragto haddii ay ku caawin karaan.
9. aamuska Dila
Sidee aad u haadaamaha!
10. Jidh dhiig
Kuwani waa waxyaalaha tago bangbangbang!
TunesGo Wondershare waa Saaxiibkiis boosaska badan Lugood, kuu maaraynta music si fudud aad iPhone iyo iPad. Sidaa daraadeed, si aad u iPhone wareejin karaan ringtones ka Lugood fudayd. Download TunesGo in ay dajiyaan Halloween ringtones in Lugood, wareejin ringtones si aad u hesho iPhone iyo niyadda u spooky sida aad jeceshahay!
Sida loo sameeyo Halloween Videos tan iyo bilowgii ilaa ugudambaysta
Sida loo undelete iPhone Email
> Resource > iPhone > Top 10 Halloween Ringtones in lagu cabsiiyo Your Friends